Pocophone: marika vaovao Xiaomi ho an'i India | Androidsis
Xiaomi dia miasa amin'ny telefaona finday avo lenta
Xiaomi dia iray amin'ireo marika mandefa telefaona betsaka indrindra eny an-tsena. Io no paikadin'ny marika sinoa hatramin'ny nahatrany teny an-tsena. Miasa amina modely vaovao avo lenta izy ireo izao, izay antenaina hapetraka any India. Na dia avo lenta hafa aza io, satria toa tsy halefa amin'ny anarana Xiaomi izy io.
Satria toa ny orinasa dia namorona marika vaovao handefasana telefaona eny an-tsena. Amin'izao fotoana izao, antsoina hoe Pocophone, ho an'ny tsenan'i India izy io. Na dia azo atao aza ny mamarana azy ireo any amin'ny firenena maro kokoa.
Ary i Xiaomi dia efa mamorona telefaona voalohany ao anatin'ny marika Pocophone. Mety ho maodely hahatratra ny avo, satria toa hampiasa Snapdragon 845 toy ny processeur izy io. Azontsika antenaina ho maodely matanjaka be io.
Ankoatr'izay, antenaina fa ny telefaona dia hanana fakantsary aoriana roa. Hanana fantsom-pandrefesana ny fantsom-baravarankely izay ao ambadiky ny fitaovana koa izahay ary voalaza fa 4.000 mAh ny bateria. Ka ity maodely amin'ny marika sinoa ity dia hanome fahaleovan-tena betsaka amin'ny mpampiasa.
Amin'izao fotoana izao dia tsy dia fantatra loatra ny drafitra Xiaomi miaraka amin'i Pocophone. Vao haingana ny orinasa no nisoratra anarana ity mari-pamantarana ity tany India. Ka antenaina fa tsy ho ela isika dia ho afaka hahafantatra maodely hafa mitondra an'io anarana io eo amin'ny tsena. Saingy tsy misy fantatra momba izany.
Tsy misy isalasalana, dia zava-tsoa mahaliana, satria Xiaomi dia iray amin'ireo marika amidy indrindra eto India. Nanjary tsena lehibe indrindra ho an'ny orinasa izy io. Noho izany, tsy maintsy ho hitantsika ny fomba fandraisan'izy ireo ireo maodely Pocophone vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi dia miasa amin'ny telefaona finday avo lenta
Xiaomi dia mandefa kinova vaovao an'ny Xiaomi Redmi 6A